Nandresy Tamin’ny Lalao Fifaninanana Baseball Manerantany Ny Repoblika Dominikana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Marsa 2013 5:54 GMT
Faly sy ravoravo ny fon'ireo Dominikana noho ny ezaka vitany tsy mampino nandritra ny fifaninanana Baseball Klasika Manerantany III. Tamin'ny Talata 19 Martsa 2013, nandrombaka ny fandresena farany tamin'ny Lalao Baseball Manerantany 2013 ny ekipa Dominikana, rehefa avy nandresy ny ekipa nasionaly Poerto Rikàna [es] tamin'ny isa 3-0. Tao anatin'ny Lalao Klasika, sambany nandrombaka ny fifaninanana manerantany ilay ekipa tsy mety resy. Fotoana nialàna tamin'ny sosialy, toekarena ary politika marefo atrehin'ny firenena ankehitriny iny herinandro lasa iny.
@PresidenciaRD [es]: Mihofahofa ambony ny saina Dominikana! Nahatratra ny faratampony Manerantany ny Repoblika Dominikana tamin'ny Lalao Baseball Klasika 2013! #MangúPower
Na mpankafy,eny fa na dia ireo tsy mpankafy aza dia samy namorona teny filamatra toy ny hoe “Plátano Power” [ karazana akondro sy nahandro miavaka any Karaiba ny plátano] ary tao amin'ny tambajotra sosialy kosa no nahitana ny tenifahatra #ManguPower, milaza foto-tsakafo miavaka iray, manana anjara toerana lehibe eo amin'ny Dominikana tsirairay avy.
Mpanao sariitatra Cristian Hernández [es], nizara sary tamin'ireo mpanaraka azy ihany koa ary nilaza ny zavatra tsara vitan'ny ekipa:
@TaniaBaezHG [es]: Tsy misy fifadian-kanina! MANGU no TANJAKA tena izy!
@HuchiLora: Lanjan'ny tanjaky ny Plátano/ ary amin'ny fifanandrinan'olon-droa / hery mangú/ lany ny hamburger androany!
@LigaDomCom [es]: Miarahaba ireo mpankafy… Andron'ny fahamarinana androany ho an'ny ekipantsika Dominikana, andron'ny aina na ny fahafatesana androany ho an'i Holandy. #ManguPower
@MargaritaCDF [es]: Tena ekipa mahatalanjona #ArribaDominicana! [Alefa Domikana] #MangúPower Tsy mety resy! #OrgulloDominicano [Reharehan'ny Dominikana]
*Nalaina tao amin'ny pejy Facebookn'ny World Baseball Classic ny sary.